Mba ndị bịanyere aka n'akwụkwọ ọrụ RCEP webatara ọnọdụ ọhụrụ nke azụmaahịa
Na Nọvemba 15, 2020, nnukwu ozi bịara wee bụrụ ihe nlebara anya nke mba niile n'ụwa. Mgbe afọ asatọ nke mkparịta ụka gasịrị, ndị isi nke mba 15, gụnyere China, Japan na Singapore, bịanyere aka na nkwekọrịta RCEP site na ogbako vidiyo. A mụtara na RCEP n'ozuzu na-ezo aka t ...
Performance tụnyere n'etiti servo moto na stepper moto
Dị ka usoro nchịkwa na-emeghe emeghe, stepper moto nwere mmekọrịta dị mkpa na teknụzụ njikwa dijitalụ nke oge a. Na ugbu a anụ ụlọ dijitalụ akara usoro, stepper moto ọtụtụ-eji. Na mpụta nke zuru dijitalụ AC servo usoro, AC servo moto na-etinyere na digita ...
Stepper moto bụ ihe na-emeghe-akaghị akara akụrụngwa na-agbanwe eletriki usu mgbaàmà n'ime angular mwepụ ma ọ bụ linear mwepụ. N'ihe banyere nke anaghị ebubata ibu, ọsọ moto, nkwụsị ọnọdụ naanị dabere na usu ugboro ole na usu nọmba, na-adịghị emetụta ibu mgbanwe, nke ...
Ọrụ Stepper Motor, Ngwakọ Stepper Motor, Emechiela Loop Stepper Motor Driver, 6 Waya Stepper Motor, 220 Volt Ọrụ Servo Motor, Servo Motor Actuator,